BAAQ LA SOCODSIIN IYO IN LOO HOWL GALO IS.ABAABUL MIDEYSAN OO XOOG LEH.
= URURKA HORUMARINTA GOBOLKA JUBBADA HOOSE =
= XARUNTA STOCKHOLM =
UHGJH/Q-10/02 Stockholm, 15/03/2002
KU:- DHAMMAAN AQOONYAHANNADA IYO WAX GARADKA G/J/HOOSE.
DHAMMAAN ODAYAASHA IYO NABADOONNADA GOBOLKA J/HOOSE.
OG:- DHAMMAAN KOOXDA CARTE IYO KOOXAHA ISAGA SOO HORJEEDA
SIYAASADDA IYO MAAMULIDDA QARANIMADA SOOMAALIYEED.
OG:- DOWLADAHA JAARAKA LAHA DALKA SOOMAALIYA.
( KENYA, ITOOBIYA IYO JABUUTI).
OG:- URURKA BISHA CAS, LAAQAYRTA CAS IYO HAY'ADAHA SAMAFALKA
ADDUUNKA EE KA HOWL GALA DALKA SOOMAALIYA.
UJEEDDO:- BAAQ LA SOCODSIIN IYO IN LOO HOWL GALO
IS-ABAABUL-MIDEYSAN OO XOOG LEH.
( Qoraalkani qaybtiisa kowaad, wuxuu ku socdaa dadka Gobolka Jubbada Hoose).
( Ninkii damiir lahow la soco ), ( Ninkii damqasho lahow dareen ), ( Ninkii dadnimo lahow aday kuu taal)
Ururka Horumarinta Gobolka Jubbada Hoose, wuxuu halkan idiinku soo gudbinaayaa warbixin kooban oo ku saabsan xaaladda dhabta ah oo ay ku sugan yihiin dadka u dhashay Gobolka Jubbada Hoose ama Carriga Waamo.
Intii ka dambaysay aasaaskii Ururka ilaa iyo hadda wuxuu ku howlanaa howlo fara badan oo ay ka midka yihiin baaristaan iyo xog-raadin la xariira sidii uu u soo ogaan lahaa xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka Gobolka J/Hoose ee waxyeelada aan la soo koobi karin ka soo gaartay dagaaladii sokeeye ee dalkeenna ee lahaa dilka, dhaca, kufsiga, gumaadka, iyo ka barakicinta dadka guryahooda iyo deegaankoodaba. Waxyaabaha aan baarista ku soo ogaannay qaarkooda waxaa ka mid ah:
- In in ka badan boqolkiiba sideetan dadka Gobolka ku dhashay ay ka carareen guryahoodii iyo beerahoodiiba iyo dhammaan waxay hanti lahaayeenba. Dadkaasi intiisa badan maanta waxay ku nool yihiin xeryaha qoxootiga dalalka aynu jaarka nahay ( Kenya, Itoobiya, Ugaandha ilaa iyo Tanzanya iwm), qaarka kalena waxay ku nool yihiin tuulooyinka iyo baadiyaha Gobollada dalka qaarkooda iyagoo ay ku haysato saboolnimo, gaajo iyo macaluul iyo daawo la'aanba uguna geeriyooda meelahaasi maalinkasta silic iyo saxariir.
Kuwa Kismaayo ku nool lagama hadli karo. Waxaa u sii dheer inta aan sare ku soo sheegnay xornimo la'aan, dhaqaale la'aan, cabsi iyo walwal iyo iyagoo ku seexda beri maxaad mudan doontaa? ma caawa ayaa laguu imaan oo lagu dili doonaa mise beri? Waxay ku seexdaan iyagoo leh Allow adiga ayaa iimaqan iyo dadkaygaba. Dad badan oo Soomaaliyeed waxay maanta cadeeyeen dalka Soomaaliya magaalada Kismaayo in ay tahay magaalada keliya ee dadka maatada ah iyo wax garadka ahba iyagoon waxba galabsan in si ka baxsan islaanimada iyo bani'aadannimada iyo Soomaalinimadaba loogu laayo. Waxay kaloo is-weydiiyaan Gobolka Jubbada Hoose ama Kismaayo ma dhul cusub oo hadda la helay baa? mise waa dhul hore u jiri jiray sida Gobollada kale ee dalka Soomaaliya? Maxaa keenay gumaadka iyo baba'a? Maxaa keenay Gobolka intaa le'eg in dadkiisu xeryaha qoxootiga ku baaba'aan?Maxaa keenay koox yar oo dan gaar ah leh maamulka Gobolka in ay gacanta ku hayso? oo loo diiday dadkii Gobolka u dhashay in ay ka qayb qaataan maamulka iyo talada iyo ka mid noqoshada ciidamada Gobolka ilaaliya? Waxaa kaloo la isweydiiyaa kooxdani sida gumeysiga u dhaqmaysa goormay ka tagi doonaan Gobolkan oo danahoodii uga dhammaan doonaa? Sababtoo ah ma ah dad u soo jeeda in ay dadka Gobolka u dhashay nolosha la qaybsadaan oo si caadi ah Gobolka u degaan haddii ay Gobolladoodii ka soo carareen oo ay ku noolaan waayeen oo ay doonaayaan in ay wax ka cunaan canbaha, muuska, babaayga iyo kalluunka Gobolka Jubbada Hoose Alle ugu deeqay? iyo haddii ay doonaayaan in ay ka mid noqdaan cayaartooyda Gobolka J/Hoose. intaasi oo dhan marabaan. waxay yaqaanaan dil, boob dhac iyo in dadka guryahooda laga xooggo. Arrimahaasina wixii maanta ka kambeeya waa waxaan loo dul qaadan karin ee u baahan in dadka Gobolka Jubbada Hoose in ay iska kaashadaan oo iska caabiyaan iyagoo hordhigaaya dadweynaha Soomaaliyeed ee jecel midnimada Ummadda Soomaaliyeed iyo nabad ku wada noolaanshaha dadka Soomaaliyeed.
- Waxaa kaloo jira oo si dhab ah loo soo xaqiijiyay dadka u dhashay Gobolka Jubbada Hoose in ay yihiin dadka ugu liita dadka Gobollada Soomaaliya dhinacyada; Nolosha, Dhaqaalaha, Caafimaadka, Waxbarashada Nabadgeliyada, Ganacsiga iyo dhammaan waxyaabaha lagu horumarin lahaa Gobolkooda. Sababtoo ah waa dad lagala dagaalamaayo in ay wax qabsadaan oo ninkii lagu tuhmo in uu aqoon ama damiir leeyahay la dilaayo ama la dhacayo isagoo lagala wareegaayo beertiisa,,dukaankiisa, doontiisa, meelaha ganacsiga iyo wax alle iyo wixii uu ku noolaan lahaa. Taasaana u keentay dadka Gobolka Jubbada Hoose in ay noqdaan kuwa uugu liita dadka Gobollada dalka Soomaaliya ee dhinac kasta Horumarka uga gaaray maantay.
- Waxaa kaloo la soo xaqiijiyay in ay jiraan dad ama kooxo ka shaqeeya isku dirka dadka u wada dhashay Gobolka Jubbada Hoose. Waxay is-hortaagaan wax kasta oo looga wada hadlaayo midnimada dadka u wada dhashay Gobolka iyo in ay wada tashadaan. Kooxahaasi waxay fiirsadaan oo keliya danahooda gaarka ah. Waxay doonaayaan maamulka Gobolka iyo ilaha dhaqaale Gobolka in uu gacantooda ka bixin si ay iyaga oo keliya u noolaadaan. Waxayna ka soo duuleen kooxahaasi Gobollo kale ee dalka Soomaaliya ka mid ah. Waxay dadka Gobolka isugu diraan reer reer, koox koox, qof qof iyo qabiil qabiil, taasoo ah calaamadaha gumeystayaashii hore si dhul ayan lahayn ugu nagaadan ama ugu tagri falaan.Fikradaasi ma ah oo keliya mid Gobolka Jubbada Hoose u gaar ah maanta ee waxaa kaloo la soo gaarsiiyay Gobollada dalka qaarkood iyo qurbahaba.Gaar ahaanna dadka Gobolka Jubbada Hoose waa mid u gaar ah in iyaga xoogga la saaro si ay u midoobin, xooggooda iyo cududoodaba meel isugu keenin. Taasoo micnaheedu yahay haddii dadka Gobolka Jubbada Hoose midoobaan, mideeyaanna cududooda iyo taladooda iyo wada jirkooda, waxaa halkaasi ka baxaaya kooxda maanta qoriga ku haysata carriga Waamo oo ka faa'ideysatay kala daadsanaanta, midnimo la'aanta iyo wada tashi la'aanta dadka Gobolka Jubbada Hoose iyo Gobollada kale ay jaarka yihiinba.
- Waxaa la soo ogaaday kooxaha xoogga ku qabsaday Gobolka Jubbada Hoose in ay soo dejiyeen dad badan oo maato ah oo ay ka soo rareen Gobollada ay ka tirsan yihiin kooxahaasi.Waxay uga dan leeyihiin in ay xoog ku yeeshaan Gobolka, kana faa'ideystaan badda iyo beeraha Gobolka. Waxayna dadkooda ka dhaadhiciyaan Gobollada Jubbooyinka iyo Shabeelooyinka in ay hore u degganaan jireen oo laga xoogay maantana ay soo dhacsadeen. Kooxahaasi waxay dhibaatooyin joogto ah u geystaan dadka Gobolka deggan si ay uga cararaan guryahooda, hantidooda iyo beerahoodaba. Waxaa intaa dheer beerihii dadka lagala wareegay oo lagu beero waxyaabo aan loo baahnayn. Waxayna dadkooda ka dhaadhaciyaan dadka Gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka ka cararay in ay mar kale ku soo laabanayn Gobolladooda. Hadaladaasi iyo fikradahaasi maalin kasta loo sheegi jiray dadka maatada ahaa ee Gobolladoodii laga soo raray ee kismaayo la soo dejiyay waxay beenowday markii la arkay xoogagii Gobolka Jubbada Hoose oo saacado gudahooda ku qabsaday Kismaayo oo cidina wax yeelo ugu gaysan. Maalintaasi kabacdi dadkii Gobolladoodii laga soo raray waxay garteen wixii ay u sheegi jireen kooxaha Kismaayo qoriga ku haysta in ay waxba ka jirin. sababtoo ah waxay ogaadeen dadkii guryahoodii la dejiyay weli in ay dagaalamaayaan oo doonaayaan in ay dib ugu soo laabtaan guryahoodii. waxay kaloo ogaadeen dadkii Gobolka u dhashay in ay qoxooti ku yihiin baadiyaha Kismaayo iyo xeryahay qoxootiga Kenya, maalin maalmaha ka mid ahna ay ku soo laaban doonaan guryahooda. Laga billabo maalintaasi dadkii guryahoodii iyo Gobolladoodii laga soo raray waxay bilaabeen in ay tartib tartiib uga cararaan ama uga baxaan Kismaayo dibna ugu noqdaan guryahoodii ay ka yimaadeen, qaar kalena waxay u carareen dalka Kenya iyagoo leh been baa naloo soo sheegay oo Gobolladeennii iyo guryaheennii baa nalaga soo raray.Waxaa nala keenay Gobol dadkii lahaa laga cayriyay guryahoodii xoogna looga qabsaday. Dadkaasi inta wax garadka ah waxay lahaayeen nin walba looma dhaammo in uu ku noolaado Gobolkiisa iyo gurigiisa ee qofku uusan ku dagaalamin Gobol uusan lahayn oo beri laga eryidoono. Waxay kaloo dadku isweydiinaayeen Kismaayo habeen iyo maalin ma qori baa lagu ilaalini? Miyay ka mid ahayn Gobollada dalka Soomaaliya? Maxay dadkeeda loo gumaadaayaa? Maxay galabsadeen? Ugu dambayntii dadkaasi wax garadka lahaa ee isaga tagay magaalada Kismaayo waxay uga tasiyayeen dadka guryahooda ka barakacay in iyagoo nabad qaba in ay ku soo laabtaan iyaguna is-cafiyaan.
Intaas waxaan ku soo koobaynaa xogtii aannu soo helnay iyo baaritaankii aannu sameynay, waxyaabaha kale ee aannu idiin hayno dib ayaan idiinku soo gudbindoonaa haddii Alle idmo. Haddaba haddii aynu nahay dadka Gobolka Jubbada Hoose maxaa talo inoo ah? Ma sidaasaanu ku joognaa oo dadkeennii iyo Gobolkeeniiba ku ilownaa? Ma sidaasaannu ku joognaa oo maxaa la yiri iyo maxaa la sheegay iyo muxuu yiri iyo muxuu sheegay hebal baannu isla meeraysanaa? Mise runtu waxay tahay baannu isu sheegnaa oo karaamadeenna, sharafteenna iyo dadnimadeenna ayaannu soo ceshannaa? Maxaa naga reebay in aannu u halganno sida dadka Gobollada kale ay isu abaabulaayaan? Maxaa naga reebay aqoonta iyo xirfadaha ama farsamada ay dadka Gobollada dalka baranaayaan oo ay ku horumarinaayaan Gobolkooda? Sababtoo ah nin Gobolkiisa wax u soo bartay beri Gobolkaaga kuuma uu dhisaayo. Maxaa noo diiday in aannu soo ceshano midnimadeenna, wada tashigeenna, wax wada qabsigeenna iyo is-jeceelkeenna aan hidaha iyo dhaqanka u laheen Gobol ahaan. Dadka Gobolka Jubbada Hoosow, waxaad ogaataan in laga bixidoono dhibaatada maantay haysata dadka Gobolkeenna iyo kuwa Gobollada kale ee Soomaaliya ( haddii Alle idmo ). Waana dhibaato dalal badan oo ka mid ah adduunka ay soo wada mareen ma ah mid maantay u gaar ah Soomaaliya oo keliya. Waxaana loo baahan yahay qof waliba in uu ku xisaabtama maxaad u qabatay dadkaagii iyo Gobolkaagiiba. Gaar ahaan kuwa qurbaha joogoow haddii aad ka mid ahaan lahayd kuwa maantay nasiibkooda noqday in ay Gobolka Jubbada Hoose ku noolaadaan oo ku dhibaataysan. Maxaad uga baahnaan lahayd dadkaaga qurbaha ku nool in ay kuu qabtaan? Waa sidaasi oo kalee, waxaad adiga u baahnaan lahayd bay maanta ayagu kaaga baahan yihiin. Ogaada nin waliba ma garto. Ninkii damiir leh, dadnimo leh, garasho leh, damqasho leh uun baa garan kara. Nintiisa daryeeli waayayna tu kale wax uma qaban karo. Waxaan kaloon idiin sheegaynaa waqtigiinna qaaliga ah ha ku luminin waxaan waxba kuu tarayn ama qof aan waxba kuu qabanayn ee dantiisa raacanaaya. Dadka Reer Waamow midnimadeenna waa dadnimadeenna.
B A A Q.
* Ururka Horumarinta Gobolka Jubbada Hoose, wuxuu ugu baaqayaa cid kasta oo ay khusayso arrimaha Soomaaliya maantay ee ku saabsan dhexdhexaadinta, nabadeynta iyo dib u dhiska Qaranimada Soomaaliya. Baaqan soo socda:-
1. In marka kowaad laga wada hadlo mudada tabanka sanno iyo dheeraadka ah dadka qoxootiga ah ee silica iyo saxariirta ugu nool xeryaha qoxootiga ama baadiyaha Gobollada dalka iyo kuwa dibadahaba iyagoo masaakiin ah, sabool ah sharaftii iyo haybadii ay lahaayeen ku waayay dalkoodii kadib markii guryahoodii laga cayriyay hantidoodiina laga dhacay, qorina loo haysto in ay guryahoodii ku soo laaban. Waa in xal loo helaa marka hore arrintaasi. Sababtoo ah inta qofka qoriga haysta uu la hortaagan yahay gurigii qofka qoxootiga ahaa, waxaan suurta gal noqonayn in la dhiso dowlad sinnaan iyo cadaalad ku dhisan.
Arrintaasina waa midda hortaagan dhiso dowlad xalaal ah oo dalka ka dhalata. Waxaana tusaale ah shirkii Carte wixii ka soo baxay weli ma hirgelin. Sababtoo ah dadkii la matali lahaa ayaa qoxooti ah oo dibadda ku nool. Marka hore waa in ayaga la soo celiyaa xeryaha ay qoxootiga ku yihiin laga soo saaraa iyo baadiyaha ay ku nool yihiin oo ay ku dhibaataysan yihiin.Markaasi kabacdi ayaa loo howl geli karaa dhisme dowladnimo iyo xukun kala qaybsi. Laa' ilaaha Ilalaah.
2. Marka Labaad, waxaa habboon in la isweydiiyo toban iyo kow sanno iyo dheeraad waa la is-abaabulaayay, shirar iyo kullanno ayaa la isugu imaanaayay si qaranimada Soomaaliyeed loo soo celiyo, loona dhiso dowlad Soomaaliyeed.( waa firad fiican, waa talo wanaagsan). Ma la is-weydiiyayse maxaa hortaagan? jawaabtu waa maya haddii runta la isu sheeg. Waxaase hortaagan waxaa weeye wax aan wada ognahay oo aanaan doonayn in aan isu wada sheegno. Waxaana weeye inta Gobol nin aan u dhalan uu doonaayo in uu xukumo, dhaqaalihii iyo hantidii uu gobolkaasi lahaana uu isaga urursado. Micnuhu waxaa weeye inta qof beertiisa, arigiisa, dameertiisa, lo'diisa, digaagiisa, doontiisa, gurigiisa iyo maamulka deegaankiisa laga haysto wey adag tahay sida loo dhiso dowlad loo wada dhan yahay oo sinnaan iyo cadaalad ku dhisan.
3. Marka seddexaad, haddii aan runta isu sheegnno, dowladnimo Soomaaliyeed waxay dhalan kartaa markii ay faraha kala baxaan ragga lacagta waalan gacanta ku dhigay intii dalka uu burburay oo iyaga doonaaya in lagala tashado ama ay maamulaan dowladda la dhisaayo. Way ka qayb qaadan karaan, wayna ka mid noqon karaan laakiin sida maantay ay u maamulaayaan oo kale yaysan noqon. Taasi ma keeni karto in la helo dhiso dowlad Soomaaliyeed oo loo dhan yahay. Waxaana tusaale noo ah Kooxda Carte iyo maamulka dhaqaalahooda cidda gacanta ku haysa. Dowlad waxay haybad ku leedahay in ay ka madaxbanaan tahay qof, koox iyo qabiilba.
4. Marka Afaraad, haddii markii ugu dambeysay lagu guulaysan waayay shirkii Carte ee qabiilka wax loogu qaybsaday. Bal markaan hala isku dayo in wax lagu qaybsado Gobol Gobol qof walibana uu ka soo jeedo Gobolkii uu ku dhashay am ah qof hebel in lagu riixo qabiilka uu ka dhashay Gobolka uu dego. Waxaa habboon in loo eego qofkaasi meeshii uu ku dhashay,wax ku bartay, ku barbaaray,ka shaqeeyay, ka ganacsaday ama ku korayba oo dadka Gobolkaasi wada dega si xor ah u soo doortaaan qofkii uga qayb geli lahaa dowladda la dhisaayo ama xukuumadaba. Waxaa marka hore muhiim ah in la fuliyo qodobka 1&2aad.
Dhammaan hay'adaha samafalka iyo kuwa gargaarka deg degga ahba, waxaan ka codsanaynaa in ay taakulayn iyo deeq joogto ah u fidiyaan guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Gaar ahaanna dadka Gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka ku nool ee gaajada, macaluusha iyo darxumid ay ku haysato meelaha ay degan yihiin sida dalka gudihiisa iyo xeryaha qoxootiga ahba oo aan jirin cid kale oo ku caawint. Waxaan ka codsanaynaa hay'adaha aan sare ku xusnay in ay warbixin joogto ah naga soo siiyaan haddii aynu nahay Ururka Horumarinta Gobolka Jubbada Hoose markasta xaaladaha dadka Gobolka Jubbada Hoose ku nool ee ku dhibaataysan iyo kuwa ku nool xeryaha qoxootiga. Si loo abaabulo dadka dibadaha ku nool ee Gobolladaasi u dhashay in iyaguna dadkooda u fidiyaan wixii deeq iyo taakuleyn ahba ee ay awoodi karaan markaasi.
UHGJH@hotmail.com =Maxamed Muse Cabdi=
= GUDDOOMIYAHA U.H.G.J/HOOSE=